Wuxuu ku jiiftay dharkii shaqada xaaskiisa ayaa Booliska ku dacaysay - iftineducation.com
iftineducation.com – Hadii aadtahay nin guursaday oo ay xaskaagu kaa diido inad ku jiifato dharka shaqada ama lebiskaaga adiga oo aad u daalan maxad sameyn laheyd?
arintani waa sheeko ka dhacday Magaalada Bad Burley Borg ee woqooyiga dalk jaramalka waana qiso aad uga yaabisay ciidkanka Poliska magaaladaasi.
Nin u dhashay dalka jarmalka iyo xaas uu qabay ayey sheekadani ka dhexdhacday kadib markii ninka oo aad u daalan uu gurigiisa ku laabtay, kadibna uu sariirta jiiftay isagoo xiran dharkii shaqada, sida surwaal Jakad iyo iskaalshooyin arintaasi ayaa u cuntamiweyday haweeneydii uu qabay ninkaasi waxana ay u wacday ciidka Poliska oo ay u sheegtay in ninkeedu uu gurigii burburiayay.
Markii ay Polisku goobta soogaareen waxa ay arkeen ninkii uu si raaxo leh ugu jiifa joodarigiisa, markii ay weydiyeen haweydiii sababta ay ugu wacday ayey ku tiri, waxan idin kugu wacay inaad inkaan qabataan maxaa yeelay anigu marabo in ninkeygu ku jiifto dharka shaqada.
Poliskii ayaa isaga tegay gurikii qoyska iyagoo haweeneydaasina aad u canantay una sheegay in la ganaaxidoono hadii ay ciyar ciyar u soo wacdo telephonka xaaladaha deg dega ah ee Poliska .
Naagta mar walba la waso oo jirkeeda jilco sida marada oo kale